Mari-nehupfumi, 15 Chikunguru 2019
Muvhuro 15 Chikunguru 2019
VaSikhala Vanopihwa Mukana weKubvisa Mari yeChibatiso
Mutongi wedare repamusoro muMasvingo, Justice Nevile Wamambo, nhasi vati mutevedzeri wa sachigaro weMDC, VaJob Sikhala, vabudiswe mutirongo votongwa vachibva kumba mushure meku bhadhariswa mari ye chibatiso inoita zviuru mashanu zve madhora ema RTGS.
VaMnangagwa Votoresa Mhiko Makomishina eZimbabwe Anti Corruption Commission
Mutungamiri wenyika VaEmmeson Mnangagwa nhasi vatoresa mhiko makomishina matsva esangano rinorwisa huori reZimbabwe Anti-Corruption Commission.
Hurumende Inotadza Kusangana neVashandi Vayo Kuti Vazeye Mihoro
Vashandi vehurumende vanonzi vanga vakatarisira zvikuru kumusangano uyu, mushure mekunge svondo rapera varamba kutambira madhora makumi mapfumbamwe nemanomwe akanga anzi nehurumende ichawedzera nawo mushandi wega wega.
Varairidzi Vanoita Musangano Pamusoro Pekuramwa Mabasa
Rimwe remasangano anomiririra varairidzi, reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti matunhu matanhatu esangano ravo akabvumirana kuti kana pasina mari inemusoro inopamidzirwa varairidzi pakupera kwemwedzi uno, nhengo dzesangano ravo dzirikuzoramwa mabasa.
Vashandi veHurumende Voisa Tariro kuMusangano weNJNC paNyaya yeMihoro
Vamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende vari kutarisirwa kusangana neMuvhuro pamusangano unonzi wakakosha zvikuru weNational Joint Negotiating Council.
ZCTU Yoyambira Hurumende Kuti Iremekedze Zvibvumirano Zvinoitwa muTNF
Munyori mukuru weZCTU, VaJaphet Moyo, vaudza Studio7 vanoti zviri pachena ku kuti hurumende haisi kuremekedza nyaya dzevashandi pasi pehurongwa hwe Tripartite Negotiating Forum.
Zimbabwe Yakundwa 73 - 37 neAustralia Mumakwikwi eNetball World Cup kuLiverpool.
Muongorori wezvemitambo, VaTichafa Muzondiwa, vanoti hapana zvayaikwanise kuita Zimbabwe pamhondoro yeAustralia mumutambo uyu.
Kupesana Kukuru Kwobuda muBulawayo
Asi muchiziviso chanyorwa naChamber Secretary, Amai Sikhangele Zhou, kumakanzura kusanganisira VaTinashe Kambarami, avo vakafanobata chigaro chameya pamwe nekuna ivo VaDube, VaMguni vati VaDube vanofanirwa kudzokera pabasa nekukasika kuitira kuti basa rekanzuru rifambe zvakanaka
Zimbabwe Netball Team Yokweshana neSri Lanka neChishanu
Chikwata cheZimbabwe Netball Team chiri kuparura makwikwi emitambo ye2019 Netball World Cup neChishanu apo maGems ari kukweshana nechikwata che Sri Lanka.